'मिडिया काउन्सिल विधेयक राम्रा पत्रकारको हितमा, धन्धा चलाउनेको विपक्षमा छ : दीपक पाठक - Himalaya Post
‘मिडिया काउन्सिल विधेयक राम्रा पत्रकारको हितमा, धन्धा चलाउनेको विपक्षमा छ : दीपक पाठक
Posted by Himalaya Post | ६ असार २०७६, शुक्रबार २२:३० |
– दीपक पाठक, सञ्चालक समिती सदस्य, रेडियो नेपाल एवं अध्यक्ष तथा सम्पादक मार्गदर्शन मिडिया
तपाई अहिले रेडियो नेपालको सञ्चालक समिति सदस्य हुनुहुन्छ । तपाई आईसकेपछि रेडियो नेपालमा के परिवर्तन आयो ?
रेडियो नेपाल एउटा इतिहास बोकेको संस्था हो । रेडियो नेपालमा विकृति, विसंगती भए, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्यो भनेर मलाई जसरी बोलाईएको थियो । तर, एउटा सञ्चालक समतिको सदस्यको काम भनेको नीतिगत कुरामात्रै गर्ने हुन्छ । त्यो बाहेक सबै काम कार्यकारीले गर्ने हो । एउटा कार्यकारीको हैसियतमा म त्यहाँ गएको भए सरकारले चाहेको जस्तो रेडियो नेपाल बनाइसक्थेँ । तर, पनि बोर्डमा भएका हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयहरु सञ्चालन भइसकेका छन् । अर्को, यो वर्ष रेडियो नेपालले उत्कृष्ट सरसफाइको पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भएको छ । सातै प्रदेशका कार्यालयहरु सुव्यवस्थित बनाउँदै स्टुडियोहरुको पुनर्निर्माण गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । एउटा नीतिगत ठाउँमा रहेर गर्न सक्ने काम मैँले राम्रो किसिमले गरिरहेको छु ।
यस समयमा तपाई रेडियो नेपालका प्रादेशिक स्टेसशनहरुमा जानुएको थियो । के पाउनुभयो अवस्था ?
एउटा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ वटा प्रदेशमा म पुगेको छु ।
रेडियो नेपालका कार्यालयको अवस्था देख्दा मलाई अत्यन्तै रुन मन लागेको थियो । २००७ सालमा स्थापना भएको एउटा सरकारी मिडिया रेडियो नेपाल यस्तो अवस्थामा छ भन्ने मैँले कल्पना पनि गरेको थिइनँ । रेडियो नेपालका कार्यालयहरु हेर्नुस् यति दर्दनाक छन् की कार्यालयमा काम गर्ने अवस्था पनि छैन । टेबल कुर्सीहरु भाँच्चिएका छन्, स्टुडियो भत्किएको अवस्थामा छ, ट्रान्समिटरले राम्रो काम गरिरहेको अवस्था छैन ।
केन्द्रीय कार्यालयमा पनि त्यस्तै अवस्था थियो । अहिले म आईसकेपछि कार्यालय सुधारउन्मुख भएको छ । मर्मत सम्भारका कामहरु बढाएको छु । भग्नाबशेष बनिरहेको रेडियोको पोखरीलाई आकर्षक ढँगले पुर्ननिर्माण गरेर मनमोहक बनाईरहेको छु । सबैलाई काम गर्ने वातावरण मैँले त्यहाँ सिर्जना गरेको छु । रेडियो नेपाललाई बचाउनका लागि, यसलाई अझ लोकप्रिय बनाउनका लागि मैँले थुप्रै काम गरिरहेको छु । रेडियो नेपाललाई सञ्चार माध्यमको मन्दिर बनाउन म लागेको छु, सबैलाई साथ दिन आह्वान पनि गर्छु ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई ‘मर्ज’ गरेर पीएसबी (सार्वजनिक प्रशारण सेवा)मा लैजाने भन्ने कुुरा पनि उठिरहेको छ । त्यसको नेतृत्वमा तपाई पनि चर्चामा हुनुहुन्छ । के छ तपाईको भनाई यसमा ?
म पत्रकारितामै स्नातकोत्तर गरेको मान्छे । कानुनमा पनि एलएलबी गरेको मान्छे । रेडियोमा मात्रै म ७ वर्ष काम गरेको छु । यो पेसामा म २२ वर्षदेखि सक्रिय छु ।
यस हिसाबले के भन्छु भने रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गरेर सार्वजनिक प्रशारणमा गएर मलाई सरकारले कुनैपनि कार्यकारी पदको जिम्मेवारी दिईयो भने दुई वर्षभित्र उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशारण सेवाको रुपमा यसलाई प्रमाणित गरिदिन्छु । म काम गर्ने मान्छे हुँ, गफ गर्ने मान्छे होइन ।
कहिले सम्ममा जान्छ त पीएसबीमा ?
आगामी वर्षको बजेटमा पनि यसलाई पीएसबीमा लैजाने कुरा गरिएको छ । कहिले जान्छ भन्ने त टुंगो छैन । तर मन्त्रीले जतिसक्दो चाँडो लैजान्छौँ भन्नुभएको छ । दुईचार महिनामा टुंगिनसक्ला ।
अर्को अहिलेको महत्वपूर्ण कुरा । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदसम्म पुर्याएको छ । पत्रकार महासंघले त्यसको विरोध गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन थालेको छ । यो विधेयकलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पत्रकार महासंघको आन्दोलन त आन्दोलनका नाममा गरिएको आन्दोलन मात्रै हो । यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । पत्रकार महासंघलाई मैँलेपनि लामो समयदेखि बुझेको छु । म पनि महासंघको महासचिव र उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा लड्दै आएको मान्छे हुँ । मुलुकभरका पत्रकारको नेटवर्क मसंग पनि छ । त्यसकारण पत्रकार महासंघ कहाँको एजेण्डा बोकेर हिंड्छ ? वास्तविक रुपमा पत्रकारको एजेण्डा महासंघले बोक्छ कि बोक्दैन ? महासंघमा गएकाहरु पत्रकार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा गम्भीर हो । त्यसकारण पत्रकार महासंघले गरेको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन ।
जहाँसम्म मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा छ, यो अत्यन्तै उपयुक्त, अत्यन्तै स्वागत योग्य र राम्रो छ ।
यो विधेयकले पत्रकारलाई जिम्मेवार, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँछ । पत्रकार भन्ने बित्तिकै जे पायो त्यही गर्ने भन्ने हुँदैन । पीत पत्रकारिता गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, पत्रकारिताका नाममा धन्दा सञ्चालन गर्नेका लागि यो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । उनीहरु यसबाट आत्तिएका छन् ।
बाहिरबाट बोकिएका मान्छेहरुले यसको विरोध गरेका हुन् । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । यो विधेयक आयो भने पत्रकार र मिडिया जिम्मेवार किसिमले चल्छन् ।
तर, सिंगो महासंघ र पत्रकारहरु नै विरोधमा उत्रिएका छन् । तपाईले राम्रो छ मात्रै भएन नि ?
मैँले अघि पनि भनेँ, रत्नपार्कमा आएर जुलुस लगाउँदैमा सिंगो महासंघ हुँदैन । यहाँ १३ हजार पत्रकार छन् । जुलुसमा कतिजना आएका छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । तपाईले टाउका गन्न थाल्नुभयो भने एक सय जनापनि पुग्दैनन् । सय जना नै सिंगो महासंघ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रेस काउन्सिल खारेज भएर मिडिया काउन्सिल आएपछि आफ्नो जागिर खुस्किने भयो, लामो समयदेखिको रजाईँ अन्त्य हुनेभयो भनेर कसैलाई टाउको दुखेको होला । आफ्नो मृत्युपत्रमा कोही पनि हस्ताक्षर गर्न चाहँदैन । त्यसैको टाउको दुखाई हो यो ।
भनेपछि, तपाईको बुझाईमा मिडिया काउन्सिल विधेयक मिडियाको हितमा छ !
संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिसकेको छ । यो अवस्थामा ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्ने कुरा त आउँदै आउँदैन नि । ऐन त मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने गरी आउँछ नि ।
तर, प्रेसलाई नियन्त्रण वा व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकार कतै निरंकुश पो हुने हो कि भन्ने शंका पैदा गरिएको छ ।
संविधानमै व्यवस्था गरिसकेपछि दायाँबायाँ गर्ने कुरा आउँदैन । अहिले तपाईले लेखेकै भरमा कहाँ थुनिनु भएको छ ? नेपालभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुक मलाई देखाउनुस् त ? तर, जे मन लाग्यो त्यही लेख्नेलाई थुन्नु नै पर्छ । यो व्यवस्था जुनसुकै देशमा पनि छ । पत्रकार संविधानभन्दा माथि जान पाउँछ ? पत्रकारलाई नियम कानुन लाग्दैन ? त्यसकारण त्यस्त विकृतीहरुलाई समाप्त पार्नका लागि यो ऐन कोशेढुंगा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
पछिल्लो समय पाँच वर्षका लागि भनेर दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार आएको छ । तर, यो सरकार आएदेखि जुन किसिमका निर्णयहरु भइरहेका छन् । ती आलोचित बन्दै गएका छन् । सरकारको कामप्रति तपाईको टिप्पणी के छ ?
‘सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई अगाडि ल्याएको छ । जुन अत्यन्तै सुन्दर नारा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो देशमा केही कुरा गर्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा देखिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीतन्त्र, कुटनीतिक नियोगले अवरोध गर्ने, आफ्नै पार्टीका नेताहरुले असहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको गतिमा मन्त्री, कर्मचारी वा सचिवालयका कर्मचारीले काम गर्न सकेका छैनन ।
सबैले प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्ष साथ दिने हो भने यो मुलुक समृद्ध बन्छ । पाँच वर्षको लागि यो सरकार टिक्छ र टिक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
नयाँ ऐन आइसकेपछि अहिलेको प्रेस काउन्सिल खारेज हुने भन्ने कुरा छ । त्यसपछि बन्ने मिडिया काउन्सिलको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ ?
प्रेस काउन्सिल अहिलेसम्म छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अपवाद बाहेक अहिलेसम्मका मान्छेहरुले प्रेस काउन्सिललाई ठगीखाने भाँडो बनाए । प्रेस काउन्सिलको इज्जत प्रतिष्ठा अहिले छ ? प्रेस काउन्सिल प्रत्रकार र मिडियाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने संस्था हो । तर अहिले त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको छ ? त्यसकारण सबै मिडियालाई मोनिटरिङ गर्नसक्ने काउन्सिलको आवश्यकता छ भन्ने मेरो १० वर्षदेखिको लडाईँ अहिले मिडिया काउन्सिल आएर पूरा भएको छ ।
मिडिया काउन्सिलमा आउने मान्छे मिडिया बुझेको, मिडियामा अनुभव हासिल गरेको र पत्रकारिता पढेको व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीको बिश्वासिलो पत्रकार भनेर तपाईलाई बुझ्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री र तपाईबीचको सम्बन्ध खासमा के हो ?
म विगत २२ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसंगको निकटमा छु । किनभने एक त गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र पनि एउटै भयो । । प्रेस चौतारीको पनि सदस्य भएको हुनाले नजिक हुनु स्वभाविक नै हो । एउटा दूरदर्शी र विकासप्रेमी छवी देखेर नै मैँले उहाँको व्यक्तित्वलाई पत्रकारितामार्फत उठाउँदै आएको हो । जुन अहिले देखिएको पनि छ ।
१० वर्षअघि मुलुकले खोजेको प्रधानमन्त्री भनेर लेख्दाखेरि दीपक पाठक बौलायो भनेर भने । तर, अहिले उहाँहरुको बोलि बन्द भएको छ ।
केपी ओली जस्तो प्रधानमन्त्री न त विगतमा थिए, न त भविष्यमा आउने छन् । उहाँलाई साथ दिने हो भने काम गरेर देखाउने मान्छे हो । प्रधानमन्त्री ओलीसंग मेरो कर्म र विश्वासको सम्बन्ध छ ।
Previousइटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले मागे माफी
Nextप्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक भण्डारीको नेतृत्वमा कार आगलागी नियन्त्रण
पाँच भारतीयको नेपाली नागरिकता खारेज, यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का २२ निर्णय
भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्ने कारण छैन : डा. भट्टराई
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार १८:२१